ज्योतिषी अर्जुन क्षत्रीले ज्योतिष शास्त्रलाइ नै बलात्कार गरेर लुट्ने काम गरेको आरोप ! - NepalDut NepalDut
ज्योतिषी अर्जुन क्षत्रीले ज्योतिष शास्त्रलाइ नै बलात्कार गरेर लुट्ने काम गरेको आरोप !
केही समयदेखि युट्युब देखि फेसबुक सम्म भाइरल भएका युवा ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीको भविष्यवाणी सबै हावा भएको एक ज्योतिषले टिप्पणी गरेका छन्।
उनले एक भिडियो अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ‘अर्जुन क्षेत्रीले हामी ज्योतिषहरुको बलात्कार गर्यो’ युवा ज्योतिष कमलमणिले दिएको उक्त अभिव्यक्ति यो बेला युट्युबमा भाइरल भैरहेको छ। उता अर्जुन क्षेत्री भने सम्पर्कविहीन रहेका छन्। फोन सम्पर्क भएन भन्दै उनी माथि विश्वास गर्नेहरू पनि यो बेला निराश छन्।
ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीको अभिव्यक्तिहरू सबै झुट रहेको र अर्जुन क्षेत्री कुनैपनि कोणबाट ज्योतिष नभएको ठहर गरेका छन्। उनले बोलेको हरेक शब्दहरू गलत रहेको र बोल्न समेत नजानेको भन्दै उक्त ज्योतिषले खण्डन गरेका हुन् ।
३३ मिनेटको भिडियोमा अर्जुन क्षेत्रीको बारेमा चर्को आलोचना मात्रै हैन ज्योतिष शास्त्र पढेर आउन समेत सुझाब दिएका छन् ।